ko htike's prosaic collection: နအဖ အကျင့်ပျက် ဝန်ကြီး၊ ဗိုလ်ချုပ်စောထွန်းရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်သတင်း
Posted by ကိုထိုက် at 12:20
ဒီဘလော့ က သတင်းတွေ ဘယ်တုန်းက မှန်ဖူးလို့လဲ၊ ဦးသန်းရွှေ သေပြီ လို့ ရေးတာလဲ ခဏခဏ၊ ရွှေတိဂုံ ဘုရား ကို ကန်ထရိုက်ပေးထားတယ်လို့လဲ မဟုတ်မမှနိ မရှက်မကြောက်ရေးခဲ့ပြီးပြီ၊ အခုလို သူများကို အပုတ်ချတဲ့ အတင်း ရေးပြန်ပြီ။
အခုတော့ သတင်းဘယ်မှန်သေးပါ့လဲ ဦးဦးဖျားဖျားရတဲ့သတင်းကို KO တစ်ယောက် သူ့ခေါင်းဆောင်တွေ ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာ သိမှမသိသေးတာ ကျွတ်ကျွတ် တကယ်သနားစရာ ကောင်းတယ်
နောက်သူများတွေ ပါးစပ်ဖျားကနေ ရေပက်မ၀င်ပြောမှ နားလည်လာမဲ့ပုံဘဲထင်တယ်
ကိုထိုက်ရေ အားပေးနေတယ် ပိုစ်တွေကိုလဲ များများတင်ပါဦး အမြဲတမ်းလာလည်ဖြစ်ပါတယ်
ဒီသတင်းမှန်မမှန် ဆောက်လုပ်ရေး အင်ဂျင်နီယာလောကထဲ သွားမေးကြည့်ပါလား ko. အဲဒီထဲမှာရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေထက်ဆိုးတာတွေတောင် ဦးစောထွန်းလုပ်ထားသေးတယ်။ အင်းဝတံတားကိစ္စ ဆိုရင်လဲ ဆောက်လုပ်ရေး အသိုင်းဝိုင်းတင်မက လူတိုင်းသိတဲ့ကိစ္စတွေပါ။ ဦးစောထွန်းနယ်ခရီးတွေမှာ ဖျော်ဖြေဖို့ သူ့လက်ထောက် အင်ဂျီနီယာတွေ CE EE တွေကအစ မိန်းမရှာပေးရတဲ့ အလုပ် လုပ်နေခဲ့ရတာ အားလုံးသိနေတဲ့ကိစ္စတွေပါ ကိုယ့်လူရေ။
18 March 2009 at 10:34
This guy, KO , would be keep covering his superior's ass even after his wife, sisters and all of his relatives were fucked by Saw Tun.
မောင်စောထွန်းရဲ့ ငယ်ပါသောင်းကျန်းပုံက ကျမ်းတစ်စောင်ပြုစုရုံနဲ့ မလုံလောက်ဘူး...။ ဟိုးးးးး တုန်းကပေါ့. အဟတ်..ဟတ်...မောင်စောထွန်းတိုင်းခန်းလှည့်လာသတတ်။ ရောက်တတ်နေရာမှာ ငယ်ပါလေးကို အစာကျွေးရလေတော့ ထုံးစံအတိုင်းနယ်မြို့လေးတစ်ခုမှာပေါ့ ။ အဲဒါ သူလိုချင်တဲ့ ဟာကိုမရတော့ အောက်ကအဖားတွေက ရပ်ကွက်ထဲက ကြေးစားမတစ်ယောက်ကို ရေချိုးသန့်စင် ပြင်ဆင်ပေးကာ ရှယ်ပါဆိုပြီးအပ်လိုက်ကြသတတ်။ အမောင်စောထွန်းကလဲ ကျေနပ်တော်မူပြီး ကျေးတောသူ အဖြူထည်လေးအမှတ်နဲ့ မိုးအလင်းဝုန်းဒိုင်းကြဲလိုက်ပုံက အဲဒီမြို့လေးမှာ ဟိုးဟိုးကျော်လေသတည်း။။
19 March 2009 at 07:41
ထိုင်ရင်းချမ်းသာချက်များလေယျာဉ်တောင်ဝယ်စီးနိုင်ပါတယ်၊သူ့သမက်အရင်တုံးကပေါက်လွတ်ပဲစားတွေ အခုဂေါက်ရိုက်နေပုံများ မနက်၁၉ကျင်းကိုYCDCမှာရိုက်ပြီးညနေကွင်းကိုနိုင်ငံခြားမှာရိုက်နိင်ပါတယ်။
22 March 2009 at 03:18
ko ဆိုတဲ့ နွားရေ...နင့်ပထွေး စောထွန်းသောင်းကျန်းပုံများ ဒီblogမှာရေးတာတွေက သူကဲတာရဲ့ ၁၀၀၀ ပုံ ၁ပုံ တောင်မရှိဘူး....တံတား ၁စင်းတစ်ယောက်...တစ်တိုင်း တစ်ယောက် တစ်ပြည်နယ်တစ်ယောက်..ရှမ်းပြည်...ချင်းပြည်...ဧရာဝတီ...ပဲခူး...မုံရွာ....ပုသိမ်...၀ါးခယ်မ..အစုံပဲ...ခန်းဆက် novel ရေးရင် မင်းဒင်ရဲ့သက်ခိုင်ထိုင်ငိုသွားမယ်....ဆောက်လုပ်ရေးက CE EE တွေ သူ့ဖို့ မိန်းမရှာပေးရလွန်းလို့ ပင်စင်ယူပီးရင် ခေါင်းလုပ်စားလို့ရတယ်လို့ ပြောရတဲ့အထိပဲ...သူ့ဖို့ မိန်းမရှာပေးရတဲ့CE EE တွေပဲ ရာထူးတက် နေရာကောင်း၇တာ.. အင်းဝတံတားကို ဆွေမျိုးတံတားကြီးလို့ခေါ်တယ်.. ဒေါ်မြင့်မြင့်ကိုက သူ့ကြောင့်အမြဲစိတ်ဆင်းရဲရတာ ဆောက်လုပ်ရေးတစ်လောကလုံးအသိ..မိန်းမဘယ်လောက်ပွေတာ လူတိုင်းအသိ..ကိုထိုက်ရေးတာ လိုသေးတယ်...
22 March 2009 at 03:31